Mgbe a ga-azụ azụ | Azu
Mgbe na-eri nri azụ
Encarni | | Azụ azụ
Azu bu anumanu ha anaghị arịọ nri Na, ọ bụrụ na ileghị aquarium, mgbe ị hụchara ya dị ka ihe ọzọ n'ụlọ, ụbọchị nwere ike ịchefu ịzụrụ azụ ma ị maghị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ.
Ikwu eziokwu, ịghara inye ha otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ ka ha rie abụghị ihe ọjọọ n'ezie n'ihi na azụ na-apụ apụ (n'agbanyeghị na ị ga-akpachara anya n'ihi na ha nwere ike ịwakpo ibe ha ma ọ bụrụ na agụụ na-agụ ha ma mesịa tụfuo ụfọdụ). Otú ọ dị, ikekwe inye azụ ahụ bụ ihe dị mkpa Ikwesighi ịgbaso usoro ihe siri ike.
Tropical Supervit adịchaghị ...
Ọdọ mmiri Tetra Multi Mix 10 L ...
Ọ ga -abụ nri na -emikpu mmiri ...
Azụ na-emekarị rie oge dị iche iche n’ụbọchị. Onwere ndi n’enye ha nri otutu oge (muta ebe a ka esi akwado arụrụ n'ụlọ azụ nri) ma ndị ọzọ na-atụ ya naanị otu ugboro n’ụbọchị n’ihi na ha ma na nri ahụ na-adị n’ala ma rie ya nke nta nke nta.
Icheta mgbe ị ga-eri ya, ihe kachasị mma ime bụ tinye ọrụ ahụ n'ihe ị na-eme kwa ụbọchị. Iji maa atụ, tupu ị gawa ọrụ, ma ọ bụ lata ụlọ akwụkwọ, ọ bụrụ ụmụ bụ ndị na-azụ azụ. Ime ya kwa ụbọchị na-abụ omume ma ọ dị mfe icheta inye ha nri.
Kedu oge kacha mma?
Akwarium feeder ...
Ikwu eziokwu na enweghị oke oge ọ bụ ezie na site na ahụmịhe m, m ga-agwa gị nke ahụ, n’abalị, ha anaghị erikarị nri ma pere mpe ma ọ bụrụ na enweghị ọkụ. Ha na-ahọrọ ichere ụtụtụ echi ka ha rie nri karịa n'abalị.
Ihe mbụ n'ụtụtụ (n'ụtụtụ) ha na-eri nri ngwa ngwa (ma si otú ahụ mee ka mmiri ghara ịdị ọcha). Aga m akwado n'oge ahụ iji zere iri nri ruo ogologo oge na mmiri (ụfọdụ azụ anaghị amasị ya).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Azụ azụ » Mgbe na-eri nri azụ
Ego ole ka ị nwere ike ịnweta akwarium?